dzese samsung galaxy note 7 mafoni emafoni kuti arambidzwe pauri ndege dzendege
Kuru Nhau & Ongororo Yese Samsung Galaxy Note 7 mafoni ekurambidzwa kunhandare dzendege dzeU.S.
Ichitsanangura munhu anoziva nezve sarudzo, Bloomberg inoshuma kuti zviremera zveU.S. zvicharambidza mafoni ese eSamsung Galaxy Note 7, akadzingwa kana kwete, kubva kunhandare dzendege. Zvibvumirano zvekubhururuka zvinowedzerwa kune ese 1.9 mamirioni Cherechedzo mamayuniti manomwe anotengeswa muUnited States, uye zvishandiso hazvigone kutakurwa kuenda nendege zvachose. Sarudzo iyi ichaziviswa zviri pamutemo nePipeline neHazardous Materials Safety Administration uye Federal Aviation Administration munguva pfupi inotevera.
Samsung yatomisa kugadzirwa kwechishandiso, icho chinetso nemabhatiri anoputika akasungirirwa kumahara ekugadzira dhizaini senge chipset isina kukodzera yakagadzirirwa kubata bhatiri & apos; s yekuchaja nekukurumidza. Varidzi veCherechedzo 7 vanokurudzirwa kuti vaidzore kuchinjana imwe yepamusoro-kumagumo smartphone kana kudzoreredzwa.
Kunyangwe pasina chinhu chiri kumisa avo vane shungu dzekubata bata phablet kubva pakuita kudaro, zvipingamupinyi zvakaita seiya iri kuda kuiswa zvichaita hupenyu nazvo kuomera kazhinji mapepa. Ehezve, njodzi yenjodzi yemoto chinhu chakanyanya kunetsa kubata nacho, nekudaro kudzosa Chiziviso 7 ndicho chinhu chine musoro kuita.
Nehurombo, varidzi veimwe ichangoburwa yeSamsung mafoni, senge iyo Galaxy S7 kumucheto vanogona kusangana nematambudziko ekufambawo, sezvo zvishandiso zvine chitarisiko chakafanana uye havazi vese vashandi vanozoziva zvizere kuti Chete 7 chete inorambidzwa kubva nendege, zvinopesana, iti, ese 'Samsung Galaxy mafoni' kana 'Samsung 7 mafoni' kana chero chii chinoitika kuve kusanzwisisana. Zvakadaro, kuratidza kuti iwe hausi & apos; usingatakure Galaxy Note 7 pachinzvimbo cheS7 kana S7 kumucheto haufanire & apos; usanyanya kunetsa.
galaxy s5 yemetro pcs
Maitiro ekutumira mamapu eGoogle kubva pakombuta yako wakananga kune yako Android foni
Apple inoderedza iPhone XR uye iPhone 8 mitengo, inouraya iPhone XS uye iPhone 7
Maitiro ekuseta yako Samsung Galaxy S5 seWi-Fi nhare hotspot (Android KitKat ineTouchWiz dzidziso)
iPhone 6s: maitiro ekugadzira yako wega Live Live Wallpaper kubva kune vhidhiyo kana GIF mifananidzo
Android: Ungachinja sei kana kuwedzera nzira dzekubhadhara dzeGoogle Play Store